Ka goosad sarrifka lacagaha
Wakiilo ka socda shirkadaha waaweyn ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee niyad jabinta oo loo yaqaan doollar halka gu'ga 20 boqolkiiba uu kordhay qiimaha "wax iibsiga".
Wax walba maahee
Hadana, sida ku xusan tixraaca, in kabadan kalabar dadka beero beero ayaa weli rajeynaya inay kordhiyaan dakhligooda. Hadeysan aheyn xilli ciyaareedkan, ka dibna kan ku xiga hubaal. Kordhinta waxay bixin kartaa soosaar sare iyo qiime hooseeya wax soo saarka.
Kobcinta waxsoosaarka Sanadka 2020 waxaa laga filayaa 68 boqolkiiba kaqeybgaleyaasha daraasada (ku dhawaad ​​10 boqolkiiba in ka badan marka loo eego 2019). Doorka ugu weyn ee halkan, aragtidooda, waxaa ku ciyaara badeecadaha ilaalinta dhirta iyo miraha tayada leh. Saacad kasta waxay xustay doorka maaraynta iyo teknoolojiyadda beeraha ee saxda ah.
Qaab dhismeedka meelaha lagu beeray bartamaha iyo koonfurta ayaa isbeddelay. Laakiin tani looma sababayn cilad-dhimis, laakiin waa xaaladda guud ee suuqa. Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee ICAR Dmitry Rylko, dayrta waxaa iska cad in koonfurta, sarreenka iyo miraha shaciirka la kordhin doono maadaama ay yihiin dalag faa’iido badan leh oo deggan.
Degmooyinka Dhexe ee Bartamaha, soosaarka hadhuudhka ee hadhuudhka ayaa horay loogu soo maray xawaare dhakhso leh: ma jirin wiish-koriyeyaal ku filan iyo awooda qalajinta. Beeraleydu si yar ayey ugu lug leeyihiin dalaggan. Hadda waxaa jira waxyaabo badan oo loogu talagalay qalajinta iyo keydinta, sidaa darteed hadhuudhka ayaa si fudud dib ugu heli doona booskiisa. Waxay leedahay faa iido wanaagsan, suuqyo cusub ayaa jira.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn xilligan, beeraleydu waxay ugu yeedheen dollar iyo gu 'boqolkiiba 20 kororka qiimaha abuurka iyo kimistariga beeraha.
Dhoofinta ayaa jecel xasilloonida
Marka loo eego qorshayaasha ogaashaha maalgashiga, waxaa muuqata in dad badani aysan hubin berri.
Ku dhawaad ​​seddex meelood labo meel jawaab bixiyaasha waxay damacsan yihiin iney kordhiyaan maalgashiga ganacsiga. Laakiin haddii sanad ka hor, boqolkiiba 86 ay dib u buuxinayaan raasamaal go'an (si ay u iibsadaan qalab, u dhisaan bakhaarro), hadda saamiyada shirkadaha noocaas ah ayaa hoos u dhacay 20 boqolkiiba. Iyo saamiga kuwa kordhinaya maalgashiga raasamaalka shaqeeya (abuurka, bacrimiyeyaasha, beero-kiimikada) ayaa kordhay.
Waxaa qoray Tatyana Tkacheva
Tags: heerka doolarfaafaDhoofinta beeraha
Intii lagu guda jiray aafada, baradhoku waxay noqdeen kuwa caan ka ah buud-digaaga
Beeraleyda Ruushku waxay ka baqayaan saameynta xun ee masiibada COVID-19
Roscrahmalpatoka wuxuu qabtaa weji webinar ah "Suuqa loogu talagalay badeecooyinka istaarijka ah ee masiibada ah: xaaladaha horumarka"